Archive du 08-oct-2021
Resy indray ny ekipam-pirenena Barea e! Toa efa mahazatra ilay “resy lava”, izay tany amin’ny fifanoherana sy fanasana vangy ara-politika no niantombohany.
BAREA resy lava Tsy misy afa-miala fa samy diso
Resy indray ny Barean’i Madagasikara! Lalao telo no vita, faharesena telo no azo tamin’ny fifanintsanana hiakarana amin’ny Mondial 2022 hatao any Qatar.
Fanampiana ny orinasa Miara-miasa ny IT University sy FTHM Consulting
Foto-pisainana iray no isan’ny nampivondrona ny IT University sy ny kabinetra FTHM Consulting ka nahatonga azy ireo hifandray tanana hiara-hiasa hampiroborobo ny firenena ary hisintona ireo mpandraharaha na avy eto an-toerana, indrindra,
Karama 7 volana tsy voaray Mitokona ireo mpandanja fiara
Raikitra ny fitokonana fanairan’ireo mpiasa amin’ny “station de pésage” na toerana fandanjana fiara miisa 7 eny amin’ny làlam-pirenena, izay mitaky ny fandoavana ny karama 7 volana.
Fampirantiana zavakanto ankehitriny Handray anjara ny hiran’i Samoela
Isan’ireo mpanakanto miisa 26 mandray anjara amin’ny hetsika fampirantiana mitondra ny lohanteny hoe “Ny fitiavanay, our love, notre amour” ny mpihira Samoela.
Hakanto Contemporary Ankadimbahoaka Sangan’asana mpanakanto miisa 26 no haranty
Nampahafantarina omaly tetsy amin’ny Hakanto Contemporary Ankadimbahoaka ny ranty ho an’ny zavakanto ankehitriny mitondra ny lohanteny hoe “Ny fitiavanay, our love, notre amour”.
Faneva Ima “Mifandamina ianareo mpitantana”
Nitondra ny heviny tao anatin’ny tambajotran-tserasera manoloana ny voka-dalaon’ny Barea omaly sy ny zava-misy eo amin’ny sehatry ny kitra Malagasy ny Kapiteny teo aloha Faneva Ima omaly
Fitazonana ny vidin-tsolika Ananan’ireo Kaompania 47miliara Ar ny Fanjakana
Mahatratra 47 miliara Ar ny trosa ananan’ireo kaompanian-tsolika amin’ny Fanjakana noho ny resaka fitazonana ny vidin-tsolika,
Tafapetraka ny faritra faha-23 Miezaka maka ny fon’i Vatovavy Rajoelina
Tontosa omaly 7 oktobra 2021 ny fametrahana tamin’ny fomba ofisialy ny Faritra faha-23 eto Madagasikara, dia i Vatovavy, rehefa avy nandalo dingana sy an-tanan-tohatra ary adihevitra maro.
Ambanja Voasambotra ilay tovolahy nandratra ny mpanakanto Djino
Voasambotry ny zandary tao Marovato, ilay lehilahy nahavita nikasi-tanana ny mpanankato Djino.
Dr Fidy Bariniaina “Tsy afaka hihidy mandava-taona isika”
Na efa nihena aza ny tranga vaovao amin’ny Coronavirus dia entanina foana isika hanao arovava orona, hoy ny dokotera mpitsabo, Dr Fidy Bariniaina.
Eric Rabesandratana « Nitanila ny mpitsara, nivoatra isika na resy aza »
Naneho hevitra avy hatrany mikasika ny lalaon’ny Barean’i Madagasikara sy RD Congo ny mpanazatra Eric Rabesandratana taorian’ny lalao omaly.
Asa mendrika sy maharitra Mbola lavitra izany i Madagasikara
Nankalaza ny andro maneran-tany ho an’ny asa mendrika sy asa maharitra tetsy amin’ny biraony etsy Anjanahary omaly ny avy eo anivon’ny Firaisamben’ny sendika Malagasy revolisionera na FISEMARE.